civil bank limited(civil bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्म ५० करोड ४० लाख बढी नाफा आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा नाफामा १४८.४१ प्रतिशतको वृद्धि भएको हो । समीक्षा अवधिका लागि बैंकको नाफा ६ करोड ९७ लाख मात्र रहेको छ । बैंकको संचालन मुनाफामा पनि ह्वात्तै बढोत्तरी भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडको एघारौं वार्षिक साधारण सभा पुस ३० गते शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सो साधारण सभाबाट संचालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम बैंकको चुक्तापूँजीको ५ प्रतिशतबराबरको बोनस शेयर तथा कर प्रयोजनको लागि प्रतिशेयर ०.२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न सर्वसम्मतिले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै सभाले आ.व. २०७८/०७९ को...
सिभिल बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान
काठडमाण्डौ । सिभिल बैंकको ११ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकको बारास्थित कलैया शाखाले स्थानीय श्री सिद्धेशवर माविको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रा प्राप्ति सहनीलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिअन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। बैंकले हरेक वर्षझै यस वर्ष पनि आफ्नो वार्षिकोत्सव कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो। छोटो...
सिभिल बैंकद्वारा एजीएम आह्वान, लाभांश पाउन कहिलेसम्म बन्नुपर्छ सेयरधनी ?
काठमाण्डौ । सिभिल बैंकले आफ्नो ११ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको बालुवाटारस्थित आम्रपाली बैंक्वेटमा बिहान ११ बजे भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश...
सिभिल बैंकको १०.२५% ब्याजदर भएको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज पुस ७ गते अन्तिम दिन रहेको छ। गत मंसिर २४ गतेबाट बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ भएको ‘सिभिल बैंक डिबेन्चर, २०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको सोमबार साँझ बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ८ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख ६० हजार ८४७.७९ रुपैयाँको कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा ५ प्रतिशतले हुन आउने ४३ करोड २१ लाख ८३ हजार...
सिभिल बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बियो
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय लम्बिएको छ। गत मंसिर २४ गतेबाट बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ भएको ‘सिभिल बैंक डिबेन्चर, २०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। अब यो ऋणपत्रमा पुस ९ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले जनाएको छ।...
सिभिल बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज मंसिर २८ गते अन्तिम दिन रहेको छ। गत मंसिर २४ गतेबाट बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ भएको ‘सिभिल बैंक डिबेन्चर, २०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। यो ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट...
सेयर बजारमा सिभिल बैंकको आगामी यात्रा कस्तो रहला ? (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेप्सेमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सिभिल बैंक पनि एउटा हो। यो बैंकमा संस्थापक ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। आधारभूत पक्ष यो बैंकले ग्राहकलाई डिपोजिट, ट्रान्ज्याक्सन बैंकिङ, रिटेल लोन, एसएमई लोन, माइक्रो बैंकिङ र कर्पोरेट क्रेडिजस्ता सेवासुविधा प्रदान गर्दै आएको...
सिभिल बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ?
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज मंसिर २४ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ भएको ‘सिभिल बैंक डिबेन्चर, २०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। कुल इकाइमध्ये १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गरिनेछ। बाँकी १२ लाख इकाइमा पनि ५ प्रतिशतले हुन आउने ६० हजार इकाइ...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डले पद तथा गोपनीयता सपथ ग्रहण गरेका छन्। बैंक सञ्चालक समितिको ३६२ औँ बैठकबाट अध्यक्षमा नियुक्त पाण्डेलाई सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन्। अध्यक्ष पाण्डले बैंकलाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सबै पक्षको...
सिभिल बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्र मंसिर २४ बाट निष्कासन हुने, १०.२५% ब्याज पाइने
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडले ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा यही मंसिर २४ गतेबाट बिक्री खुला गर्ने भएको छ। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ भएको ‘सिभिल बैंक डिबेन्चर, २०८८’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको हो। कुल इकाइमध्ये १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गरिनेछ। बाँकी १२ लाख इकाइमा पनि ५ प्रतिशतले हुन आउने ६०...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंकले संचालक समितिका अध्यक्ष प्रतापजङ्ग पाण्डको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिलकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा बैंकको प्रधान कार्यालयमा बिभिन्न सेवाहरुको थालनीको साथै विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरीे एघारौं वार्षिकोत्सवको गरी मनाएको छ । बैंकले प्रधान कार्यालय लगायत देशैभरिका शाखाहरुमा समेत...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा संचालक प्रतापजङ्ग पाण्डे चयन भएका छन् । मंसिर १ गते बसेको बैंक संचालक समितिको ३६२ औं बैठकले पाण्डेलाई अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको हो । बैंक अध्यक्ष चयन भएपश्चात प्रतापजङ्ग पाण्डेले सर्वसम्मत रुपमा बैंकको अध्यक्ष पदमा चयन गरी थप जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सबै...
सिभिल बैंकको नाफा २०२% ले बढ्यो, इपीएसमा १८०% को सुधार
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सिभिल बैंक लिमीटेडको खूद नाफा उछालको गतिमा बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म ९ करोड ६६ लाखमा सीमित खूद नाफा २०१.८८ प्रतिशतले बढाएर २९ करोड १८ लाखको उचाई चुमाएको हो । सिभिल बैंकले अघिल्लो वर्ष १३ करोड ८२ लाखमा सीमित संचालन मुनाफा बढाएर ४२ करोड ६४ लाखको उचाई चुमाएको छ भने...
लक्ष्मी बैंकको नाफा बढ्यो, अन्य सूचकको अवस्था कस्तो छ ?